China Ingqolowa Flour Mill Factory, Ingqolowa Flour Mill Supplier
Icwecwe lokuGaya umgubo wengqolowa
Isixhobo seFlour Mill seCompact yomgubo wengqolowa kumatshini wesityalo sonke siyilelwe kwaye safakwa kunye nenkxaso yesakhiwo sentsimbi. Olona lwakhiwo lwenkxaso lwenziwe ngamanqanaba amathathu: izinto zokugaya zibekwe kumgangatho ongaphantsi, iisterter zifakwe kumgangatho wokuqala, iinyikima kunye nemibhobho yomoya ikumgangatho wesibini.
Izinto ezivela kumatshini okusila zisuswa yinkqubo yokuhambisa umoya. Imibhobho evaliweyo isetyenziselwa ukungena komoya kunye nokucoca uthuli. Ukuphakama kwendawo yokusebenzela kuphantsi kakhulu ukunciphisa utyalomali lwabathengi. Itekhnoloji yokugaya inokuhlengahlengiswa ukwanelisa iimfuno zabathengi ezahlukeneyo. Inkqubo yolawulo lwe-PLC olukhethekayo inokuluqonda ulawulo oluphakathi ngeqondo eliphezulu lokuzenzekelayo kwaye yenze lula ukusebenza kwaye ibhetyebhetye. Umoya evaliweyo kuthintelwe ukuchitheka uthuli ukugcina imeko yokusebenza yococeko eliphezulu. Ilitye lokusila liphela liza kufakwa kwindawo yokugcina izinto kunye noyilo lungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno ezahlukeneyo.
Umthamo Big wokugaya ingqolowa
Oomatshini ikakhulu bafakwe kwizakhiwo zekhonkrithi eziqinisiweyo okanye kwizityalo ezenziwe ngesinyithi, ezihlala zinemigangatho emi-5 ukuya kwezi-6 (kubandakanya isisele sengqolowa, indlu yokugcina umgubo, kunye nendlu yokudibanisa umgubo).
Izisombululo zethu wokugaya umgubo ikakhulu ziyilelwe ngokwengqolowa American kunye Australia ingqolowa emhlophe nzima Australia. Xa usila uhlobo olunye lwengqolowa, ireyithi yokutsalwa komgubo yi-76-79%, ngelixa uthuthu luyi-0.54-0.62%. Ukuba kuveliswa iintlobo ezimbini zomgubo, inqanaba lokukhutshwa komgubo kunye nomxholo womlotha uya kuba yi-45-50% kunye ne-0.42-0.54% ye-F1 kunye ne-25-28% kunye ne-0.62-0.65% ye-F2. Ngokukodwa, ukubala kusekwe kwisiseko sendlela eyomileyo. Ukusetyenziswa kwamandla ekuveliseni itoni enye yomgubo akukho ngaphezulu kwe-65KWh kwiimeko eziqhelekileyo.